Luchie Mendoza Allen: manfaat daun sirih buat daerah kewanitaan
manfaat daun sirih buat daerah kewanitaan Kansa ugbu a ghọtara dị ka otu onye nke egwu nke ọrịa n'ụwa nile. N'ezie, nke na-eduga na-akpata ọnwụ mgbe ọrịa obi na ọrịa bụ ọrịa nke cervical cancer .
Ke Indonesia, cervical cancer na- akọ na- 20-24 ọhụrụ ikpe kwa ụbọchị. Cervical cancer ma ọ bụ cervical cancer bụ ịza aza ngwọta na -etolite n'olu ( cervical ).
Ndu ndimmadu cancer achọpụtara ma meso ha na ogbo otu onye bụ 70-75 percent , na ogbo abụọ bụ pasent 60 , na ogbo atọ na na pasent 25 , ndien ke ogbo anọ ọrịa anya na -adị ndụ kwa ike .
Kansa ọgwụgwọ ekewa atọ ụzọ radieshon ọgwụ , ịwa ahụ , na iji ọgwụ . Mmetụta nke ọrịa cancer ọgwụgwọ na- iche , sitere na site na ntutu isi ọnwụ , dizziness , ọgbụgbọ , mgbada n'usoro ike nke ahu si nchebe ọnwụ.
Dị iche iche dị n'akụkụ mmetụta nke ọrịa cancer ọgwụgwọ ihe itunanya ụzọ ume omume na elu irè ma ntakiri mmetụta . Otu n'ime mgbalị ịzụlite herbal ịgba akwụkwọ si na osisi nwere mgbochi ọrịa cancer ogige .
Ọfọn, otu n'ime osisi nwere nwere dị ka anticancer bụ ọbara ọbara betel ( Piper crocatum ). Site na nchọpụta Abrams ( 2009 ), ọ na- amara na oge wepụ uhie betel akwukwo nwere ike inhibit na proliferation ọrịa ure ara sel ( T47D ).
Ha na-apụ n'ebe ahụ, Dhian Grace Nsọ Purnama na ibe si Ngalaba Ɔka sɛ, ohere nke mgbakọ na nwepụ na Mmadụ sayensị Bogor Agricultural University ( IPB - MIPA ) odomo nwalee onyinye na -acha uhie uhie betel megide cervical cancer sel ( HeLa ).
" Anyị na-agbalị tụnyere ndị flavonoid ogige ( ogige kweere na inhibit uto nke ọrịa cancer , sel ) Ndị si na mmiri wepụ na oge wepụ uhie betel doo pasent 30 na inhibit uto nke cervical cancer mkpụrụ ndụ ," wee sị ebute nchọpụta , Dhian , ke e dere na nkwupụta ka Okezone Wednesday ( 12/18/2013 ).
Oru nyocha esịne ke Mmemme Mmụta creativity ( PKM ) bụ pasent 30 oge extracts uhie na betel akwukwo mkpụrụ na ngụkọta flavonoid etoju ukwuu karịa mmiri wepụ uhie betel akwukwo . Nke a bụ n'ihi oge dị ike na-adọta ndị ọzọ bioactivity nke ogige dị n'ime uhie betel akwukwo .
Otú ọ dị , ọnụ ọgụgụ ndị buru amụma molekụla aro ka flavonoids ke extracts karịa mmiri ka oge wepụ pasent 30 . Anticancer ọrụ nwere kasị ukwuu mgbochi dị pasent 30 oge wepụ .
"Anyị na- ekwubi na ihe kasị mma extracts nwere ike inhibit cancer cell ibu bụ pasent 30 oge wepụ uhie betel akwukwo . Otú ọ dị ka o kwesịrị ime iji nweta n'ihu ọcha dị ọcha ogige ahụ ọrụ dị ka anticancer uhie betel akwukwo ," enye ama adian do .
Diposting oleh Lisa Fernandez di 19.57
manfaat sabun beras merah herborist
manfaat daun sirsak kering untuk pria
manfaat daun sirih pada jerawat
cara cepat menurunkan berat badan tanpa diet dan o...
cara menghilangkan komedo jerawat dan kulit bermin...